Shacbiga Dalka Togo oo Kacdoon ka sameey xukunka Qoosyka 50 sano iska heeysta – Balcad.com Teyteyleey
Shacbiga Dalka Togo oo Kacdoon ka sameey xukunka Qoosyka 50 sano iska heeysta
By Abdallah Hassan	 On Oct 8, 2017
dadka Dalka Togo ayaa bilway gadood ka dhan ah xukunka ku dhisan qooyska oo ay u=dalka soo xakumayeen mudo 50 sano. reer Foure Gnassingbe Madaxweynah hada talda haya ilaa 2005 markii uu geeriyoday aabihiis. qooyskan oo dalka fac ka fac soo xakumay. dadka shacbiga ayaa donaya isbedel dhanka hoganka iyo dimuqradiyada oo ay dooran karan cida ay donayaa
cidanka dowlada ayaa kala horymid dadka awood sheegasho iyo risaas. waxana ay dowlada hawada ka saartay isgaarsiinta iyo saxaafada madaxa banaan oo ay ka baqeeyso ineey caalmaka u soo bandhigto waxa ka dahcay dalka togo
dadka ayaa samaynaya mudahardyo nabadeed oo ay ku mujinaya kacdoon kaa oo ay fariirn uu diryaan reer Gnassingbe in ay ka degan xukunka dadka fursad siya. dhalinyaro badan aqoonayhano kana yimid dibada ayaa waxaa ay si isdabajoog ah u dlabanayan in dalka laga hirgaliya nidaam dumuqraadi ah
ma ahan markii ugu horeyse dadka togo ay arinka ak gadoodan
The post Shacbiga Dalka Togo oo Kacdoon ka sameey xukunka Qoosyka 50 sano iska heeysta appeared first on Ilwareed Online.
Daawo: Magaalada Toronto Oo lagu dilay 72 saac labo Soomaali ah
Ciidamada Kenya oo Kismaayo ka bilaabay dhaqdhaqaaq ay uga guurayaan Saldhigyada ay degan yihiin